Global Voices teny Malagasy » Andeha hitsangatsangana ao Japana, mivantana ao amin’ny YouTube · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Jolay 2018 6:03 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tsidika, Zavakanto & Kolontsaina
Efa ela ve ianao no te-hitsidika an'i Japana, saingy tsy mba afaka nanao izany? Na angamba tsy nanam-potoana, na lafo loatra ny tapakila fiaramanidina (sy ny zava-drehetra hafa momba ny fandehanana hiala-sasatra). Aza manahy–manao ny fitsangatsanganana rehetra ho anao ny fantsona Youtube Kappa2700s .
Natokana ho an'ny “Mandehandeha, Mitsangatsangana, ary Mihinana “, ary nanomboka tamin'ny Jolay 2012, olona teo amin'ny dimy tapitrisa hatramin'izao no nijery ny lahatsary tao amin'ny fantsona.
Kyoto dia iray amin'ireo toeram-pizahantany malaza indrindra ao Japana, efa nandray mpitsidika 15 tapitrisa tamin'ny taona 2017. Iray amin'ireo toeram-pizahatany malaza indrindra ao an-tanàna ny ilany atsinanana, anisan'izany i Higashiyama . Ny zava-nisongadina tamin'ity horonan-tsary ity dia ny faritra manodidina ny Tempolin'i Kiyomizu , ny manodidina an'i Gion sy Pontocho , lalan-kely tery ahitana toeram-pisotroana dite sy trano kely fisotroan-toaka ihany koa.
Miorina ao amoron-dranomasin’ Japana mitoka-monina sy ambanivohitra tanteraka ao amin'ny prefektioran'i Kyoto, toeram-piazahantany malaza i Amanohashidate  (“tetezana mitsingevan'ny lanitra”) izay mbola tsy fantatry ny ankamaroan'ny mpizahatany avy any ivelan'i Japana.
Manomboka ao amin'ny Gara Osaka ny lahatsary, manana fiatoana ao amin'ny tobin'ny tafika an-dranomasina manatantara ao Maizuru  eny an-dàlana. Malaza amin'ny maritrano amin'ny biriky miloko mena  sy “curry” manga  tamin'ny vanim-potoana Viktôriana ity tanànan-toby an-dranomasina ity – noraisin'i Amiraly Togo  voalohany tany Japana tamin'ny taona 1870 ny “curry”.
Faranan'ny lahatsary amin'ny fitsidihana an'i Amanohashidate  ny lahatsary.
Kurashiki , ao Okayama, any andrefan'i Japana, no toeram-pizahatany malaza iray hafa ho an'ny kura narenina na tranom-pitehirizana nentim-paharazana Japoney marobe. Ity lahatsary ity dia mandalo ao amin'ny Faritra manan-tantaran'i Kurashiki Bikan  ary avy eo mitsidika ny manda-lapa Okayama .
Any amin'ny tendro avaratra andrefan'ny  nosy Shikoku, Matsuyama dia mety ho toerana malaza ranomafana indrindra amin'ny lohataona any Japana, Dogo Onsen .
Raha maka toerana lehibe ao amin'ny tantara noforonina tamin'ny taona 1906 Botchan  (坊 っ ち ゃ ん), iray amin'ireo sangan'asa literatiora malaza indrindra ao Japana miresaka ny momba ny tanàna i Natsume Sōseki, nanome aingam-panahy ny dobo filomanosana tamin'ny horonan-tsarimiaina Spirited Away  ny dobo filomanosam-bahoaka lehibe indrindra ao Dogo Onsen.
Ity lahatsary ity dia mitsidika ny dobo filomanosana lehibe indrindra , sy mijanona ao amin'ny toerana fisotroana kafe mivarotra zava-pisotro  sy vatomamy vita amin'ny yuzu  sy voankazo hafa makirana maniry ao amin'ny faritr'i Matsuyama.
Raha ny tanànan'i Kyushu ao Nagasaki no mety ho fantatra indrindra any ivelan'i Japana amin'ny maha-toerana nisian'ny fanafihana atomika faharoa izay namarana ny Ady Lehibe Faharoa , dia manana tantara lava sy manankarena ity tanàna seranan-tsambo ity noho ny fifandraisany ara-tantara amin'i Eoropa sy i Shina.
Mitsidika ny Mozean'ny baomba atomika Nagasaki sy ny Peace Park (Valan'ny Fandriampahalemana) ny lahatsary, fa misy ihany koa ny fitsidihana ny Glover Garden sy ny trano fonenan'i Thomas Glover  taloha, Ekosey nonina tany Nagasaki taoriana kelin'ny nisokafan'i Japana tamin'ny tontolo ivelany nanomboka tamin'ny taona 1860. Niasa ho fantsona namindra ny teknolojia Eoropeana – toy ny basy – mankany Japana i Glover, ary mety nanampy tamin'ny fanombohan'ny firenena teo amin'ny lalany mankany amin'ny Ady Lehibe Faharoa.
Mampiseho ny talaky maso ireny fitetezantany ireny. Manana lahatsary an-jatony nalaina manerana an'i Japana ny fantsona kappa2700s, anisan'izany ny horonan-tsary maromaro nalaina tao Nara , renivohitr'i Japana taloha, sy Osaka , tanàna faharoa be vato sy marevaka ao Japana.
Raha mitady tazana momba ny tendrombohitra Fuji ianao , ahitana izany koa ao amin'ny kappa2700s.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/28/123805/
 Mandehandeha, Mitsangatsangana, ary Mihinana: https://www.youtube.com/user/kappahakase01s/about
 roanjato : https://www.youtube.com/user/kappahakase01s/videos
 mpitsidika 15 tapitrisa : https://www.japantimes.co.jp/news/2018/07/05/national/overcrowded-sites-packed-buses-main-complaints-kyoto-tourists-record-number-visitors-flock-city/#.W1Zpp9JKhhE
 Tempolin'i Kiyomizu: https://www.youtube.com/watch?v=24Rafgh6Km0&t=361s
 Gion : https://www.youtube.com/watch?v=24Rafgh6Km0&t=1615s
 maritrano amin'ny biriky miloko mena: https://www.youtube.com/watch?v=hIJpz44PLFI&t=136s
 curry” manga: https://www.youtube.com/watch?v=hIJpz44PLFI&t=407s
 Amiraly Togo: https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=80545
 Faritra manan-tantaran'i Kurashiki Bikan: https://www.youtube.com/watch?v=6wyeWiL80iY&t=435s
 manda-lapa Okayama: https://www.youtube.com/watch?v=6wyeWiL80iY&t=2538s
 tendro avaratra andrefan'ny: https://en.wikipedia.org/wiki/Matsuyama,_Ehime
 Dogo Onsen: https://en.wikipedia.org/wiki/D%C5%8Dgo_Onsen
 Spirited Away: http://www.ana-exjapan.com/en/sp/discover/shikoku/pickup/p_06.html
 dobo filomanosam-bahoaka lehibe indrindra : http://en.matsuyama-sightseeing.com/spot/12/
 dobo filomanosana lehibe indrindra: https://www.youtube.com/watch?v=kLdv3Iow3NU&t=2724s
 fanafihana atomika faharoa izay namarana ny Ady Lehibe Faharoa: https://www.newyorker.com/tech/elements/nagasaki-the-last-bomb
 Mozean'ny baomba atomika Nagasaki : https://www.youtube.com/watch?v=5xRQV7MeUpg&t=329s
 Peace Park (Valan'ny Fandriampahalemana) : https://www.youtube.com/watch?v=5xRQV7MeUpg&t=610s
 Glover Garden : https://www.youtube.com/watch?v=5xRQV7MeUpg&t=1922s
 tazana momba ny tendrombohitra Fuji ianao: https://www.youtube.com/watch?v=OVg5fCk043c&t=1061s